module linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > module linear လျှပ်စစ် actuator
module linear လျှပ်စစ် actuator
AOX-QL စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် lတွင်ear လျှပ်စစ် actuaသို့r လျှောက်ထား သို့ fastidious ထိန်းချုပ်မှု auသို့mation အလုပ် တွင် တွင်dustrial ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နှင့် ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား protection.Sတွင်ce 1997, AOX ရှိပါတယ် လုပ် တိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်မှု သို့ ပို့ အဆိုပါ အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေး ပြောင်းလဲပစ် lတွင်ear လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through တွင်novative စီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့ resကျွန်တော်တို့၏ces စီမံခန့်ခွဲမှု, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ ခဲ နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် Chတွင်a.
Related စိုထိုင်းဆ: <90% (25Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)
linear လျှပ်စစ် actuator ပြောင်းလဲပစ် AOX-QL စီးရီး၏ shell ကို anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့ 6, IP68 နှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထား optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
AOX-QL စီးရီး 2. မော်တော် linear လျှပ်စစ် actuator ပြောင်းလဲပစ်
ထိခိုက်ရှောင်ရှားရန်အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ asynchronous မော်တာ, အသေးစား, အကြီးစား torque နှင့်အသေးစား inertia အင်အားသုံး F-class ကို insulator တွင်လည်း rating ။
handwheel ၏ဒီဇိုင်း, ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရ, အလုပ်သမား-saving, သေးငယ်သည်။ Declutch ပါဝါမပါဘဲလျှင် handwheel ခြင်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်တဲ့အခါမှာအာဏာကိုအလိုအလျောက် reset ရန်။
1. Actuators နှင့်အဆို့ရှင်ကိုစနစ်တကျ install နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီ။
6. လျှပ်စစ် actuators နှင့်အဆို့ရှင်နဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှား ASIA မှရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိ linear လျှပ်စစ် actuator ပြောင်းလဲပစ်ပုံမှန် AOX-QL စီးရီး။
မေး: သင် linear လျှပ်စစ် actuator ပြောင်းလဲပစ်သင့်ရဲ့ AOX-QL စီးရီးများအတွက်မည်သည့်လက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
hot Tags:: module linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်